Talooyin ku saabsan shukaansiga loogu talagalay keli-talisnimada ee kulanka maalinta habboon! »Sugarlove®
Talooyin ku saabsan shukaansiga loogu talagalay keli-talisnimada ee kulanka maalinta habboon!
Rag badan oo rag iyo dumarba leh ayaa waqti adag ku leh inay la kulmaan qofka saxda ah. Tan inta badan waa sababta oo ah inta lagu gudajiro habka shukaansiga, inta badan waxay la kulmaan dad aan isla wadaagin hadafyo iyo ujeeddooyin la mid ah sida ay sameeyaan. Tusaale ahaan, adoo raadinaya lammaane waqti dheer la wadaagaya nolosha, waxaad la kulmi kartaa dad badan oo ka mid ah barta shukaansi kuwaas oo kaliya raadinaya isku-xir deg-deg ah.
Geedi socodka shukaansi iyo had iyo jeer la kulanka qofka qaladka ah ayaa laga yaabaa inuu aad u niyad jabiyo laakiin tani macnaheedu maahan inaad ka quusato. La kulan qofka saxda ah waxay qaadataa waqti aad u muhiim ah iyo hagitaan kugu filan, howshu way fududaan doontaa oo aad bay uga sii raaxeysan doontaa. Halkan waxaa ku yaal talo bixinno kaa caawinaya inaad la kulanto qofka saxda ah isla markaana aad u dhisto xiriir macno leh, xiriir waara.
Aqoonso Caqabadahaaga Sidaad Ku Raadin Laheyd Jaceylka
Caqabadaha helitaanka jacaylka ayaa noqon kara mid iskood isu geysta ama ay sababi karto deegaankaaga dibedda. Qaar ka mid ah caqabadaha is-gaadhsiinta ah ee jacaylka ayaa ka mid ah naftaada inaad ku qanciso inaysan jirin dad sii fiican oo kaa tagay, isku-dheellitir shaqo oo aan caafimaad qabin iyo rajooyin sare. Waxyaabaha dibedda ku jira waxaa ka mid ah boorso qiiro leh oo ay sababaan cilaaqaadyadii hore iyo ku soo koray deegaanno dhibaataysan.
Ka dib markii la aqoonsado carqaladaada, ku dhaqan wax ka qabashada. Faham in waxkastoo ku dhacay deegaankaaga dibadiisa aysan khaladkaaga ahayn iyo inaad tahay qof si gaar ah u madaxbannaan oo awood u leh inaad jacayl ku hesho qofka saxda ah. Caqabadaha is-abaabulay waxay u baahan yihiin shaqo dheeri ah. Waxay ku lug leedahay sameynta waqti aad ku dheelitirto noloshaada, fahamka waxkasta oo khaldan aragtidaada iyo ula kac ah oo ku saabsan helitaanka jacaylka.
Dib-u-qiimee fikradaha qaldan ee dibedda ku saabsan Jacaylka iyo Shukaansi
Waxaa jira fikrado badan oo khaldan oo la wadaago oo ku saabsan helitaanka jacaylka iyo shukaansiga. Kuwaas waxaa ka mid ah; Farxadda waxaa lagu gaari karaa oo keliya marka aad xiriirka gogoldhigto, Soojiidashada deg degga ah macnaheedu waa in aad xiriirka sii waddo, haweenku waa kuwa dareen ahaan ka badan ragga, jacaylka dhabta ahi waa mid joogto ah oo waad baddali kartaa qof aad jeceshahay.
Hadaladaas oo dhami waa marin habaabin. Si loo kala eryo qaar ka mid ah, soo jiidashada isla markiiba ma ahan micnaheedu inay tahay jacayl waarta. Dareenka ayaa is beddelaya waqti ka dib mararka qaarna dadka sida ugu dhaqsaha badan isku xirnaanta ay u noqdaan kuwa jecel marka ay waqti wada qaataan. Xaqiiqda kale waa jacaylku ma aha mid taagan. Hormoonnada iyo xaaladaha nololeed lafdhabarta ah way is beddali karaan sida aan dareemeyno waqti ilaa waqti laakiin taasi macnaheedu maahan in xiriirka go'ay.
Ogow Waxyaabaha Aad Ka Filaysid oo Ku Saabsan Helitaanka Jacaylka
Markaan raadineyno jacayl, mararka qaar waxaan leenahay filashooyinka aan macquul aheyn ee nooca qofka aan jeclaan laheyn inaan xiriir la lahaano. Rajooyinkaan ayaa badanaa ku saleysan waxa aan ku aragnay asxaabteena, qoyska iyo madadaalada TV-ga. Tani waxay kaa dhigi kartaa inaad u aragto lammaanahaaga inuu yahay mid aan ku filnayn. Aqoonsiga baahiyahaaga iyo kuwa aan macquul aheyn waxay noqon laheyd dariiqa wanaagsan ee lagu bilaabi karo.
U hel geesinimo oo bilaw shukaansi
Marka ay jiraan caqabado badan oo maskaxda kaa celinaya inaad jacayl hesho, mararka qaarkood way adag tahay inaad ka booddo oo aad bilowdid shukaansi. Markaad ka takhalusto caqabadaha qaarkood, tilmaamo qaabab aad jeclaan lahayd inaad qof kula kulanto. Dadka qaar waxay ku raaxeystaan ​​shukaansiga khadka tooska ah halka qaar kalena ay doorbidaan in lagu soo bandhigo saaxiibbada suurtagalka ah asxaabta iyo qaraabada. Dooro wax kasta oo kuu shaqeeya adiga oo bilow safarka.
Nolosha kusii hay
Mid ka mid ah waqtiyada ugu adag inta lagu jiro shukaansi waa inaad naftaada is xasuusiso inay jiraan waxyaabo kale oo isla siman ama ka muhiimsan raad-raaca xiriirka jacaylka. Nolosha ku dhaqaaq oo ku sii wad riyadaada sida aad jacayl u raadsanayso. Sidoo kale xusuusnow inaadan khiyaanayn aragtiyaha ugu horreeya iyo in qof kastaaba leeyahay cilado, oo aad adigu ku jirto.
Xiriir dhab ah waxay muhiim u yihiin xiriirka jaceylka. Dhageysiga, feejignaanta iyo si dhab ah u muujinta xiisaha waxay gacan ka geysan doontaa dhisidda xiriir dheer oo waara. Hal dariiqo oo aad si guul leh ku bixin karto dareenka waa inaadan diiradda saarin fikradahaaga oo aad joogtid markasta oo aad la kulanto lammaanahaaga iman kara.
Ahmiyada siiso Nasashada
Inta lagu gudajiro habka shukaansiga, waxaa jira daqiiqado soo bandhigaya cadaadis badan. Tani waxay badanaa dhacdaa markaad u soo dhowaatid shukaansi shaqo ahaan ama howlo ku lug leh isku xiridda naftaada si ay kuwa kale u aqbalaan. Kaliya iska ilaali inaad ahaato oo naftaada ku lug yeela nashaadaadyo aad jeceshahay markaa waxaad kula kulmi doontaa dad isku fikir ah deegaannadaas.
Noqo mid naxariis leh oo ku saabsan diidmada
Diidmo waa lama huraan. Mar uun nolosha, waxaad runtii la kulmi doontaa. U furfuran fursadaha lagu diidi karo oo ula dhaqan sidii wax caadi ah nolosha. Yaanay u horseedin nooc ka mid ah xanaaq dadka ama ha kaa joojiso raadinta jacayl. Aqoonso dareenkaaga oo hore u soco.
La soco Calaamadaha Casaanka
Calaamadaha casaanka waxay u dhaqmaan sida calaamadaha digniinta si ay u muujiyaan in xiriirku u badan yahay inuusan sii socon. Waa muhiim inaad aaminto dareenkaaga markii aad dareento inaysan wax ku qummanayn lamaanahaaga mustaqbalka. Calaamadaha casaanka qaarkood waxaa ka mid ah ku tiirsanaanta aalkolada, cadaawadda, isgaarsiinta la'aan, dabeecadda xakameynta iyo ballanqaad la'aanta.
Khibradaha xiriir ee hore ayaa u abuuri kara arrimo aamin ah dad badan. Waxaad ka baqi kartaa in lagu sii daayo, khiyaaneeyo ama xitaa qof kale loo nugul yahay. Aaminaada dadka waxay ubaahantahay dadaal badan mararka qaarna, waxaad ubaahantahay caawinaad daaweeyaha ama kooxda taageerada. Ogaanshaha in qof kasta iyo waaya aragnimaduba ay kala duwan yihiin waa tallaabada ugu horreysa ee aaminka mar labaad.
La kulanka qofka saxda ah dammaanad kama qaadanayo dammaanadda in xiriirku sii jiri doono weligiis. Waxaad u baahan tahay inaad sameyso dadaal si aad uga dhaqaaqdo shukaansi una gudub xiriir macno leh oo waara. Tani waxay u baahan tahay kobcinta badan waxayna ku lug leedahay xiriir furan, xallinta khilaafaadka caddaaladda, maalgashiga midba midka kale iyo inaad yeelato qof maskax furan, gaar ahaan isbeddel.
Helitaanka jacaylku waxay noqon kartaa waayo-aragnimo cajiib ah laakiin weligaa ha gasho xiriir cabsi ah inaad keli ahaato. Dad badan oo sidan sameeya waxay la kulmaan nooca khaldan ee dadka waxayna ku dhamaadaan khibrad nololeed oo xun. Waxaa wanaagsan inaad dulqaad yeelatid safarkan intaanad ku dhex cararin wax uun. Noloshaada dhis, raaxeyso oo raadso riyadaada intaad ku jirtid.